Abu Dhabi - Baku oo hadda maraya Etihad Airways
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Abu Dhabi - Baku oo hadda maraya Etihad Airways
Airlines • Airport • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Qadar • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Khamriga & Ruuxa
Shirkadda Etihad Airways ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku bilaabayso duulimaadyo qorshaysan oo u dhexeeya Abu Dhabi, caasimadda Isutagga Imaaraatka Carabta iyo Baku, caasimadda Jamhuuriyadda Azerbaijan, laga bilaabo 2 Maarso 2018.
Wadadan cusub ayaa loo soo bandhigayaa si looga faa’iideysto baahida xoogan ee sii kordheysa ee duulimaadyada isku xira Imaaraadka iyo Azerbaijan. Adeegga waxaa lagu shaqeyn doonaa saddex jeer usbuucii iyadoo la adeegsanayo 136-kursi oo Airbus A320 ah, oo lagu qaabeeyey 16 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 120 ee Dhaqaalaha.
Azerbaijan waxay soo bandhigtay barnaamijka ka dhaafida fiisaha muwaadiniinta Imaaraadka bishii Nofeembar 2015 waxayna ku sii balaarisay quruumaha kale ee GCC horraantii 2016. Tani waxay kicisay safar badan oo ka socda GCC oo dhan illaa iyo dalxiis u imanaya oo ku yaal isgoyska Yurub iyo Aasiya, taas oo siisa booqdayaasha. marin u helida goobo aad u baaxad weyn oo dabiiciyan aan la daboolin iyo dhaqan qarniyo soo jiray. Baku, oo ku taal Badda Caspian, waa marinka koowaad ee waddanka iyo xarunta ganacsiga.
Peter Baumgartner, Madaxa Fulinta ee Etihad Airways, ayaa yiri: “Abuuritaanka marinkii ugu horreeyay ee abid ee isku xira labada caasimadood waxay muujineysaa muhiimadda ay leedahay xoojinta ganacsiga, dalxiiska iyo xiriirka dhaqan ee u dhexeeya Imaaraadka iyo Azerbaijan.
“Meesha ugu cusub ee laga raacayo shabakada caalamiga ah ee Etihad Airways waxay sidoo kale ka tarjumaysaa sida ay nooga go’an tahay isku xirka Abu Dhabi iyo suuqyada soo koraya ee doonaya duulimaadyada tooska ah iyo sii wadida xiriirinta qeybaha kale ee adduunka.
“Iyadoo lagu saleynayo kororka laga arkay bilihii la soo dhaafay Imaaraadka iyo wadamada Khaliijka ee dariska ah ilaa Azerbaijan, waxaan ku kalsoonahay in wadada cusub ay sare u qaadi doonto taraafikada Imaaraatka, dhanka kale waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno dadka Azerbaijan duulimaadyada aan ku tagno Abu Dhabi iyo wixii ka dambeeya . ”
Intii lagu guda jiray sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sanadka 2016, dalxiisayaasha ajaanibta ah ee booqanaya Azerbaijan waxay gaarayeen 1.7 milyan. Tirada booqdayaasha Imaaraatka iyo GCC waxay kordheen 30 jeer isla mudadaas sagaalka bilood ah sanadkii 2015, waxaa sii shiday fududeeynta xayiraadaha fiisaha.
Horraantii sanadkan, Guddiga Dhaqaalaha Wadajirka ah ee Imaaraadka iyo Azerbaijan ayaa sheegay in labada dalba ay diiradda saarayaan sagaal qodob oo muhiim u ah iskaashiga labada dal, oo ay ka mid yihiin gaadiidka cirka, dalxiiska, isgaarsiinta, deegaanka, biyaha, beeraha, tamarta la cusboonaysiin karo, tikniyoolajiyadda casriga ah iyo warshadaha. Ganacsiga aan saliida lahayn ee udhaxeeyay labada dal wuxuu gaaray in kabadan US $ 605 milyan sanadkii 2015, wuxuu kusii kordhay US $ 228 milyan sagaalkii bilood ee ugu horeeyay sanadka 2016.
Duulimaadyada cusub ee Etihad Airways, oo shaqeynaya Arbaco kasta, Jimcaha iyo Sabtida, waxay siiyaan waqtiyada ugu habboon ee martida tagaya iyo kuwa imanaya Abu Dhabi iyo Baku. Jadwalka ayaa sidoo kale bixiya isku xirnaan ku habboon kana imaanshaha shabakadda caalamiga ah ee diyaaradda.
Jadwalka duulimaadka: Abu Dhabi - Baku, laga bilaabo 2 Maarso 2018:
Duulista No. Asalka Ka bixitaan Goob Imaansho Frequency Dayuurad
EY297 Abu Dhabi 10: 10 Baku 13: 15 Arbaco, Jimco, Sabti A320
EY298 Baku 16: 30 Abu Dhabi 19: 25 Arbaco, Jimco, Sabti A320